Salt Lake faritra tany Etazonia ny hafa niaina andro, horohorontany 5.7 amin'ny amin'ny maridrefy Richter. Ary ny anjely nandray nipetraka teo an-tampon 'ny Fiangonana Môrmôna mba very ny anjomara teny an-tànany. Izany dia faminaniana efa ho sary ny zavatra isika miaina amin'izao fotoana izao, izay miaina dia mihorohoro tsy misy mitovy. Ny zava-drehetra izay azo hozongozonina hohozongozonina, ary izay rehetra tsy nanao an 'i Jehovah ho latsaka amin'ny tany. Ny ara-politika, ara-pivavahana sy ara-toekarena ny rafitra fantatsika efa hanao ny farany. Raha nisy kely foana dia ho hitanao fa hiala tamin'ny maizina sy ny korontana, ny Satana sy ny anti-rafitra kristianina fa ny Tompo dia farany handrava sy hitondra tsinontsinona. Babylona dia ho resy amin'ny farany ary ny Tompo dia hanjaka ny rariny.
Izahay nandritra ny taona maro ho ao an-lasa mba hahitana Toy ny ataon'io isika miaina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fotoana rehetra isika efa nanana tarehin-tsoratra teo aloha, dia toy izany tokoa ny Coronavirus nanozongozona izao tontolo izao amin'ny fomba tsy nieritreritra azo atao. Tsy ampy telo volana, izao tontolo izao no niova, haingana sy tsy misy fampitandremana. Olona an'arivony tapitrisa no voakasiky ny toe-javatra, ary afaka tena miresaka momba ny eran-areti-mifindra, ary ny toe-javatra izay mahatratra taitra kontinanta rehetra. Ao Italia irery ihany efa ho 1000 ny olona maty indray andro monja. Ny tena mampatahotra dia ny zavatra tsy misy mahalala mandra-pahoviana izany no mbola, na izao tontolo izao rehefa somary lasa ara-dalàna indray.
Araka ny efa voasoratra fahiny no tsy manome antsika ny fahatakarana ny korontana eran-hanjaka araka ny fampakarana - fisehoan-javatra tsy nampoizina, eran-asa sy matanjaka governemanta maneran-tany. Inona no iainantsika ankehitriny, paves ny lalana ho ambony ny Antikristy. Eny, zava-dehibe dia afaka mahatsapa ny ny fotoana, ary mahatsapa toy ny tena misy isika izao, amin'ny fotoana tsy ho ela Jesosy, dia hiverina.
Moa Coronavirus mialoha
Izany Michael Snyder, izay efa nahare faminaniana avy John Paul Jackson, ny rahalahy iray ao an-trano amin'izao fotoana izao amin'ny Tompo. John naminany ny "faharoa" areti-mifindra izay ho avy, fa tsy fantatra mazava na ny amin'izao izay ny hafa. Jackson efa naminany izao manaraka izao:
"Ny Tompo nilaza tamiko fa hisy areti-mifindra, fa ny voalohany no hita ho mbola kely nefa nahatsiravina. Fa ny hafa dia hahazo matotra "
Efa niaina teo aloha mahatsiravina Ebola virosy sy ny vorona gripa, fa efa Na izany aza dia voafetra raha oharina amin'ny izany. Corona otrik'aretina manana noho ny antony nivadika ho tena lehibe sy niely ny tahotra amin 'ny fomba tsy nahita izahay teo aloha.
Mihevitra aho fa miaina amin'ny fotoana izay dia afaka manantena ny fiverenan'ny Tompo. Mihevitra aho fa miaina amin'ny fotoana efa nitodika i Jesoa maso an'i voafidiny sy tiany. Mihevitra aho fa miaina amin'ny fotoana ny hery misintona, ny filàna sy ny fahatakarana ny maizina ho avy avy amin'ny tany, dia tsy mbola nisy hita. Ny famantarana ny fotoana, dia ho fantatsika sy ho nahalala ny fotoana ho avy ny Tompo. Inona no tsapanao rehefa mijery manerana izao tontolo izao, inona no milaza anao litera ireo fa afaka intsony manala ho zavatra tsy nahy na mpandray? I mandre sy mahita ny tena mitovy voasoratra fampakarana, ary hiverina hody any an-trano ny any an-danitra. Avy tsy ho ela, ry malala Tompo ô!
Angel Moronia € ™ ny trompetra Salt Lake Falls Horohorontany | LDS Living
V 04, onsdag 27 januari 2021 kl 04:18